Ukuqala kwakhona kwenqanawa: Iifowuni zeCarnival Sunshine eOcho Rios ngoMvulo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Ukuqala kwakhona kwenqanawa: Iifowuni zeCarnival Sunshine eOcho Rios ngoMvulo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Imisebenzi yenqanawa iya kuphinda iqale eJamaica ngoMvulo, nge-16 ka-Agasti ka-2021, kunye nefowuni yeCarnival Sunshine eOcho Rios.
I-Carnival Sunshine icwangciselwe ukubiza iZibuko le-Ocho Rios.
Yinqanawa yokuqala yokuhamba ngenqanawa enabakhweli bamanye amazwe ukuya kubiza kwizibuko laseJamaican okoko kwaqala ubhubhane we-COVID-19.
Oku kuya kuphawula inyathelo eliphambili ekuvulweni kwakhona kwecandelo lezokhenketho laseJamaica, eliye lachaphazeleka kakubi ngubhubhane wehlabathi.
“Ndonwabe kakhulu ukucebisa ukuba iJamaica ekugqibeleni izakubona ukubuya kwenqanawa ngolwesithathu we-16 ka-Agasti. Siyakwamkela oku kuqalisa kwakhona njengoko sisazi ukuba amawaka abantu baseJamaica baxhomekeke kushishino lokuhamba ngenqanawa ngeendlela zokuphila, kwaye iyakuba nefuthe elihle kuqoqosho lwethu ngokubanzi, utshilo uMphathiswa wezoKhenketho, u-Hon. UEdmund Bartlett.
“Ndifuna ukuqinisekisa uluntu ukuba eli khwelo lilawulwa ngokungqinelana nemithetho engqongqo yezempilo kunye nokhuseleko ye-COVID-19 protocols ekhokelwa yimigangatho yehlabathi kunye neendlela ezilungileyo zokuqinisekisa ukhuseleko nokhuseleko lwabemi bethu kunye neendwendwe. Ukongeza, inqanawa ilawulwa ngokungqinelana noMyalelo woLwandle oMiselweyo woLwandle oluLinganisiweyo kunye noThintelo olubhengezwe liZiko laseMelika loLawulo lwezifo (CDC). Ukufika kweCarnival Sunshine ngoMvulo kuphawula isiganeko esibalulekileyo kwiinzame zokubuyisela kwimeko yesiqhelo kunye nokuqalisa kwakhona kokuhamba ngenqanawa, eyayinqunyanyisiwe ngenxa yobhubhane, ”wongeze watsho.
"Phantsi kwamanyathelo angqingqwa olawula ukuqala kwakhona kokuhamba ngenqanawa malunga nama-95% abasebenzi kunye nabakhweli bagonyiwe ngokupheleleyo kwaye bonke abakhweli kufuneka banike ubungqina beziphumo ezibi kuvavanyo lwe-COVID-19 olwenziwe kwisithuba seeyure ezingama-72 zokuhamba ngomkhumbi," utshilo uMphathiswa uBartlett. . Kwaye kwacaciswa ukuba kwimeko yabakhweli abangagonywanga, uvavanyo lwe-PCR luyalelwa, kwaye bonke abakhweli baya kujongwa kwaye bavavanywe (i-antigen) ekwehleni kwabo.
Ngelixa ukhweleyo, abasebenzi baya kucelwa ukuba bahambisane neenkqubo ezingqongqo ezigunyaziswe ngumgaqo-nkqubo osemthethweni woMyalelo woLwandle oMiselweyo. Oku kufuna ukuba kuthathwe amanyathelo othintelo, kwaye iindlela zokujonga kunye nokuphendula zibekhona ebhodini ngalo lonke ixesha.
UNjingalwazi Gordon Shirley, uMongameli kunye neCEO, iZiphathamandla zeZibuko laseJamaica (PAJ), ubonakalise ukuba “umnxeba owenziwe yiCarnival Sunshine ngumboniso weenyanga wentsebenziswano engaguquguqukiyo kunye nencoko namaqabane ethu okuhamba ngenqanawa kunye noMphathiswa wezeMpilo nokuPhila (MoHW) . Aba bachaphazelekayo banike inkxaso kunye nesikhokelo esikhulu ukunceda i-PAJ ngokulungelelanisa ukusebenza kunye nemigangatho yehlabathi kuthathelwa ingqalelo iparadigm yokusebenza kwe-COVID-19. Ukulungiselela ukuqala kwakhona kwemisebenzi yokuhambisa ngenqanawa eJamaica, siphucule onke amazibuko ethu ngokuhambelana nezikhokelo kunye nemigaqo ye-COVID-19 kwaye onke amazibuko ethu afakelwe amagumbi okuhlala wodwa kunye nogutyulo lwelindle. ”
Uye wongeza wathi: “Sisebenze ngokusondeleyo kakhulu ne-MoHW kunyaka ophelileyo kwaye sithobele ingcebiso yabo, salandela inzululwazi, ngoko ke i-PAJ iqinisekile ngokwazi kwethu ukubonelela ngamava ethu abakhweli abahamba ngeenqanawa kwindawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo. okusingqongileyo, ngaphandle kwemiceli mngeni ye-COVID-19. Siyibulela ngokungazenzisiyo i-MoHW kunye nabalingane bethu bokuhamba ngenqanawa ngenkxaso yabo engagungqiyo kumaxesha ovavanyo kwaye sijonge phambili ekuqhubekeni kwecandelo lethu lokuhamba ngenqanawa njengoko siliqonda igalelo elibonakalayo ishishini elinalo kwamanye amashishini nakuqoqosho lwaseJamaican ngokubanzi. ”
“Siyavuya ukuba yinqanawa yokuqala yokuhamba ngenqanawa eya Buyela eJamaica nokunika iindwendwe ithuba lokuzibonela bonke ubuhle beli, ”utshilo uChristine Duffy, uMongameli weCarnival Cruise Line. "Egameni leCarnival, ndingathanda ukubulela uMphathiswa wezoKhenketho, iSebe lezeMpilo kunye nokuPhila, kunye namaqabane ethu ngokusebenza nathi ekubuyiseni uhambo olukhuselekileyo ukubuyela eJamaica," wongeze watsho.
Abakhweli baya kuvunyelwa ukuba behle enqanaweni ukuba bathathe inxaxheba kukhenketho kwi-COVID-19 Resilient Corridors, esele ibekelwe iindwendwe zokumisa ixesha elide ngaphezulu kwengxelo. Iqondo lokujonga okuhle kwiipaseji likwi-0.6 yeepesenti.
Iipaseji zijongwe ngokudibeneyo yiNkampani yoPhuhliso lweMveliso yoKhenketho (i-TPDCo), iSebe lezeMpilo kunye neNtlalontle, iSebe lezoKhuseleko kuZwelonke, uMphathiswa woRhulumente waseKhaya noPhuhliso lwamaPhandle, kunye nezoThutho neMigodi.
“URhulumente waseJamaica ukhe waxoxa ngeendlela zokuhamba ngenqanawa, kunye namaqela achaphazelekayo, malunga nokuqala kwakhona kokusebenza kwenqanawa ngelixesha kugcinwa iinkqubo zempilo nezokhuseleko. Siyavuya ke ngoko ukuba ekugqibeleni oku kuyinyani. Ndincoma iinzame zabo bonke abathathi-nxaxheba kubandakanya i-PAJ, Icandelo loMphathiswa Wezempilo kunye ne-Wellness, kunye neJamaica Vacations Limited (i-JAMVAC) ngegalelo labo ekuqinisekiseni ukuba ikhuselekile kwaye ikhuselekile imikhosi yokuhamba ngenqanawa eJamaica, utshilo uMphathiswa uBartlett.